Bible Mu Nsɛm Onyankopɔn Hyɛ Paradise ho Bɔ - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
SAA mfonini yi betumi ayɛ te sɛ paradise a Onyankopɔn de kyerɛɛ ne diyifo Yesaia no. Yona akyi bere tiaa bi na Yesaia bae.
Paradise kyerɛ “turo” anaa “anigyebea.” So ɛkae wo biribi a yɛahu wɔ nhoma yi mu dedaw anaa? Ɛte sɛ turo fɛfɛ a Yehowa Nyankopɔn yɛ maa Adam ne Hawa no, ɛnte saa anaa? Nanso so asase nyinaa bɛdan paradise da bi?
Yehowa ka kyerɛɛ ne diyifo Yesaia sɛ ɔnkyerɛw paradise foforo a ɛreba ama Onyankopɔn nkurɔfo ho asɛm. Ɔkae sɛ: ‘Habɔdɔm ne oguan bɛtra asomdwoe mu. Nantwi mma ne gyata mma bɛbom adidi, na mmofra nketewa ahwɛ wɔn so. Sɛ abofra di ɔwɔ a n’ano wɔ bɔre ho agoru mpo a, ɔrenyɛ no hwee.’
Nnipa pii bɛka sɛ: ‘Eyi rentumi mma da. Ɔhaw wɔ asase so bere nyinaa, na ɛbɛkɔ so ara.’ Nanso dwen ho hwɛ: Ofie bɛn na Onyankopɔn de maa Adam ne Hawa?
Onyankopɔn de Adam ne Hawa traa paradise. Esiane sɛ wɔantie Onyankopɔn nti na wɔn fie fɛfɛ no bɔɔ wɔn, wɔbɔɔ akwakoraa ne aberewa na wowui. Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛsan de nneɛma a efii Adam ne Hawa nsa no ama nnipa a wɔdɔ no.
Paradise foforo a ɛreba no mu no hwee renhaw adwene anaasɛ ɛnsɛe ade. Asomdwoe a edi mu bɛba. Nnipa nyinaa benya ahoɔden ne anigye. Ɛbɛyɛ sɛnea na Onyankopɔn pɛ sɛ ɛyɛ fi mfiase no. Nanso akyiri yi yebesua ɔkwan a Onyankopɔn nam so de eyi bɛba.
Yesaia 11:6-9; Adiyisɛm 21:3, 4.
Ná hena ne Yesaia, ɔtraa ase bere bɛn, na dɛn na Yehowa de kyerɛɛ no?
Dɛn na asɛm “paradise” no kyerɛ, na dɛn na ɛkae wo?
Dɛn na Yehowa ka kyerɛɛ Yesaia sɛ ɔnkyerɛw mfa Paradise foforo no ho?
Ɛyɛɛ dɛn na Adam ne Hawa fie fɛfɛ no bɔɔ wɔn?
Dɛn na Yehowa de ahyɛ wɔn a wɔdɔ no no bɔ?
Kenkan Yesaia 11:6-9.
Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn Asɛm da asomdwoe a ɛbɛtra nnipa ne mmoa ntam wɔ wiase foforo no mu no adi? (Dw. 148:10, 13; Yes. 65:25; Hes. 34:25)
Honhom fam mmamu bɛn na Yesaia nsɛm no renya wɔ Yehowa nkurɔfo mu nnɛ? (Rom. 12:2; Efe. 4:23, 24)
Hena na ɛsɛ sɛ yɛde nsakrae a nnipa reyɛ wɔ wɔn suban mu nnɛ ne nea wɔbɛyɛ wɔ wiase foforo no mu no ho nkamfo ma? (Yes. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Filip. 4:7)
Kenkan Adiyisɛm 21:3, 4.
Ɔkwan bɛn so na Kyerɛwnsɛm no da no adi sɛ Onyankopɔn ne adesamma bɛtra wɔ sɛnkyerɛnne kwan so, na ɛnyɛ sɛ ɔne wɔn bɛtra nipaduam wɔ asase so? (Lev. 26:11, 12; 2 Be. 6:18; Yes. 66:1; Adi. 21:2, 3, 22-24)
Nusu ne yaw bɛn na wobeyi afi hɔ? (Luka 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Adi. 21:4)